၁၅.၄.၂၀၁၉ – TKBC Bible
၁ထိုအခါ ယေရုရှလင်မြို့သားဖာရိရှဲတို့နှင့် ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင်၊ ၂ရှေးဟောင်းတို့မှဆက်ခံသော နည်းဥပဒေကို ကိုယ်တော်၏တပည့်တို့သည် အဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူး ကြပါသနည်း။ သူတို့သည် လက်မဆေးဘဲ အစာစားကြပါသည်တကားဟု လျှောက်ကြလျှင်၊ ၃ကိုယ်တော်က၊ သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသော် နည်းဥပဒေကိုအမှီပြု၍ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော် ကို အဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြသနည်း။ ၄ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကား၊ မိဘကိုရိုသေစွာပြုလော့။ အကြင်သူသည် မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှား ၏၊ ထိုသူသည် အသေသတ်ခြင်းကို ခံစေဟုလာသတည်း။ ၅သင်တို့မူကား၊ အကြင်သူသည် ကိုယ့်မိဘကို၊ သင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသော ငါ၏ဥစ္စာသည် အလှူဝတ္ထု ဖြစ်စေဟုဆို၏၊ ၆ထိုသူသည် ကိုယ်မိဘကိုပင် ရိုသေစွာမပြုရဟုဆို၏။ ထိုသို့သင်တို့သည် အဆက်ဆက်ခံသော နည်း ဥပဒေအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို ပယ်ကြ၏။ ၇လျှို့ဝှက်သောသူတို့၊ ဟေရှာယသည် သင်တို့ကိုရည်မှတ်လျက် ဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါ့ထံသို့ ချဉ်း ကပ်၍ နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါ့ကို ရိုသေကြ၏။ စိတ်နှလုံးမူကား ငါနှင့်ဝေးလှ၏။ ၈လူတို့စီရင်သောပညတ်တို့ကိုသွန်သင်၍ နည်းဥပဒေသပေးလျက်ပင်ငါ့ကို အချည်းနှီးကိုးကွယ်ကြ၏ဟု ၉နောက်ဖြစ်လတံ့သောအရာကို လျောက်ပတ်စွာ ဟောခဲ့ပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။
၁၀ထိုအခါ လူအစုအဝေးကို အထံတော်သို့ခေါ်၍၊ သင်တို့နားထောင် နားလည်ကြလော့။ ၁၁ခံတွင်းသို့ဝင်သောအရာသည် လူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်။ ခံတွင်းမှထွက်သောအရာသည် ညစ်ညူး စေသောအရာဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၁၂တပည့်တော်တို့သည်ချဉ်းကပ်၍၊ ယခုမိန့်တော်မူသောစကားကို ဖာရိရှဲတို့သည်ကြားသောအခါ စေတနာစိတ်ပျက်ကြသည်ကို သိတော်မူသလောဟုလျှောက်ကြ၏။ ၁၃ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါ၏ခမည်းတော်စိုက်တော်မမူသော အပင်ရှိ သမျှတို့ကို နှုတ်ရလိမ့်မည်။ ၁၄ထိုသူတို့ကိုရှိပါလေစေ။ သူတို့သည်လူကန်းတို့အား လမ်းပြသောလူကန်းဖြစ်၏။ လူကန်းချင်းတဦးကို တဦးလမ်းပြလျှင်၊ နှစ်ဦးတို့သည် တွင်းထဲသို့ကျကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၁၅ပေတရုကလည်း၊ ထိုဥပမာကို အကျွန်ုပ်တို့အား ဖွင့်ပြတော်မူပါဟုလျှောက်လျှင်၊ ၁၆ယေရှုက၊ သင်တို့သည် ယခုတိုင်အောင် ပညာမဲ့လျက်နေသေးသလော။ ၁၇ခံတွင်းသို့ဝင်သမျှသည် ဝမ်းထဲသို့ဆင်း၍ ရေအိမ်တွင် စွန့်ပစ်သည်ကိုနားမလည်ကြသေးသလော။ ၁၈ခံတွင်းမှထွက်သောအရာမူကား၊ နှလုံးထဲက ထွက်လာ၍ လူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်၏။ ၁၉မကောင်းသောကြံစည်ခြင်း၊ လူအသက်ကိုသတ်ခြင်း၊ သူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်း၊ မိန်းမလွတ်နှင့် မှား ယွင်းခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်း၊ မမှန်သောသက်သေကိုခံခြင်း၊ သူ့အသရေကိုဖျက်ခြင်းအရာတို့သည် နှလုံးထဲက ထွက်လာ၍၊ ၂၀လူကို ညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်ကြ၏။ လက်မဆေးဘဲလျက် အစာကိုစားခြင်းမူကား၊ လူကိုညစ်ညူး စေသည်မဟုတ်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
1တုၤနုၤတစု, ပှၤဖၤရံၤရှဲဒီးပှၤကွဲးလံာ်လၢယရူၤရှလ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်ဟဲဆူယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်.2ပမှံၤပပှၢ် အတၢ်စံးစိၤတဲစိၤန့ၣ်, ဘၣ်မနုၤလၢနပျဲၢ်နဘီၣ် လုၣ် သ့ၣ်ခါပတာ်အီၤလဲၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တုၤအအီၣ်တၢ် ဒီး, တသ့ကွံာ်ဘၣ်အစုဘၣ်.
3 ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ဘၣ်မနုၤလၢသု လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ်စ့ၢ်ကီး ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လၢသုတၢ် စံးစိၤတဲစိၤလဲၣ်.4အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤမၤလိာ်တၢ်ဒီးစံးဝဲ ဒၣ်, ယူးယီၣ်နမိၢ်နပၢ်တက့ၢ်.Ref. ပှၤလၢ အကတိၤအၢအမိၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အပၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, သံဒီးမ်အသံတ က့ၢ်.Ref.5မ့မ့ၢ်သုဝဲသ့ၣ်အံၤ, သုစံး, ဖဲဒၣ် ပှၤလၢအစံးဘၣ်အမိၢ်အပၢ်, ဖဲဒၣ်တၢ်လၢနဂ့ၤန့ၢ်ဘၣ် လၢယၤတမံၤမံၤအံၤ, မ်အကဲထီၣ် တၢ်မၤဘူၣ်တက့ၢ် န့ၣ်, ဒီးတဘၣ်ယူးယီၣ်ဘၣ်အမိၢ်အပၢ်ဘၣ်.6ဒီးမ့ၢ်သုစံးစိၤ တဲစိၤတၢ်သတးဒီး, သုမၤဟးဂီၤယွၤ အတၢ်မၤလိာ် လီၤ.
7 ပှၤလီတၢ်ဖိသ့ၣ်ဧၢ, စီၤယရှါယၤကတိၤတၢ်လၢဝံ အကျိာ်လၢ သုဂ့ၢ်ဘၣ်မးလီၤ. ဒီးစံးဝဲဒၣ်,
8 ပှၤတကလုာ်အံၤသုးဘူးအသးဒီးယၤလၢအထး ခိၣ်, ဒီးယူးယီၣ်ယၤလၢအပျုၤလီၤ.မ့မ့ၢ်အသးန့ၣ်ယံၤဝဲဒီးယၤလီၤ.
9 မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်သိၣ်လိတၢ်လၢပှၤကညီအတၢ်မၤ လိာ်လၢ တၢ်သိၣ်တၢ်သီအလီၢ်, ဒိီးဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယၤကလီကလီလီၤ.Ref
10 ဒီးကိးန့္ဂျပှင်္ဂ္ဂျီမု္ဂျန့္ဃျဆူ အအ္ဃျိဒီး စံးဘ္ဃျအီင်္, ဒိက န္ဃျဒီးန္ဂျပ္ဂ္ဂျတ္ဂျတက့္ဂျ. 11 တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢအလဲၤနုာ် လၢပကိာ်ပူၤ, အဝဲန့ၣ်မၤဘၣ်အၢပှၤကညီဘၣ်.မ့ၢ်တၢ် လၢအဟဲထီၣ်လၢပကိာ်ပူၤ, အဝဲန့ၣ်မၤဘၣ်အၢပှၤက ညီလီၤ.
12 တုၤနုၤတစုအပျဲၢ်အဘီၣ်ဟဲဆူအအိၣ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, နသ့ၣ်ညါလၢပှၤဖၤရံၤရှဲ နၢ်ဟူတၢ်ကတိၤ တထံၣ် န့ၣ်ဒီး, အသးဆါဝဲစ့ၢ်ကီးဧါ. 13 ဒီးစံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကယဲၢ်သ့ၣ်လၢယပၢ်အိၣ်လၢ မူခိၣ်တသူၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်, ကဘၣ်တၢ်ထဲးထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ. 14 ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲတက့ၢ်. မ့ၢ်ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်လၢအဒုးနဲၣ်ကျဲလၢ ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်လီၤ. ဒိီး ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်မ့ၢ်ဒုးနဲၣ်ကျဲလၢ ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်ဒီး, ကလီၤ တဲာ်လၢတၢ်ပူၤခံဂၤလၢာ်လီၤ.
15 ဒီးစီၤပ့းတရူးစံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, တၢ်ကတိၤဒိ တထံၣ်န့ၣ်စံးဘၣ်တဲဘၣ်ပှၤတက့ၢ်. 16 ဒီးယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ ဒၣ်, သုသူၣ်ဆးသးဆးတအိၣ်ဒံးဘၣ်ဧါ. 17 ကယဲၢ် တၢ်လၢအလဲၤနုာ်လၢပကိာ်ပူၤန့ၣ်, လီၤဘၣ်ဝဲလၢပ ဟၢဖၢပူၤဒီး ဘၣ်တၢ်ကွံာ်တ့ၢ်အီၤလၢ တၢ်အ့ၣ်ဆါ အလီၢ်န့ၣ်, သုနၢ်တပၢၢ်ဒံးဘၣ်ဧါ. 18 မ့မ့ၢ်တၢ်လၢအဟဲ ထီၣ်လၢပကိာ်ပူၤတဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်အဟဲထီၣ်လၢ ပသး ကံၢ်ပူၤ, မၤတကဆှီဘၣ်ပှၤကညီလီၤ. 19 အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကူၣ်အအၢအသီ, တၢ်မၤသံပှၤကညီ, တၢ်အဲၣ် ဘံးအဲၣ်ဘၢ, တၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ, တၢ်ဟုၣ် တၢ်ဘျၣ်တၢ်, တၢ်အုၣ်အသးကဘျံးကဘျၣ်, တၢ် ဒုၣ်ဒွဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ဟဲထီၣ်လၢပသးကံၢ်ပူၤလီၤ. 20 အန့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဘၣ်အၢပှၤကညီလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤ အီၣ်တၢ်ဒီး အစုလၢအတသ့ကွံာ်ဘၣ်န့ၣ်, တမၤတ ကဆှီဘၣ်ပှၤကညီဘၣ်.